फोनमा कुरा गर्दा सुरुमा बोल्ने शब्द ‘हेल्लो’ को प्रयोग कसरी भयो ? – My Life Magazine
Home /फोनमा कुरा गर्दा सुरुमा बोल्ने शब्द ‘हेल्लो’ को प्रयोग कसरी भयो ?
HistoryOctober 18, 2019
फोनमा कुरा गर्दा सुरुमा बोल्ने शब्द ‘हेल्लो’ को प्रयोग कसरी भयो ?
एक्काइसौं शताब्दीमा आएर अहिलेको जमानामा मोबाइल तथा फोन प्रयोग नगर्ने व्यक्तिहरू निकै कम नै होलान् । फोन आउँदा हरेक व्यक्तिले फोन उठाउने बित्तिकै पहिलो ‘हेल्लो’ भनेर जवाफ दिने गर्छन् ।
हेल्लो भनिसकेपछि मात्र बाँकी कुराकानीहरू गर्ने गरिन्छ । कसैलाई फोन गर्ने बित्तिकै वा कसैले फोन उठाउने बित्तिकै सधै बोल्नुभन्दा अगाडि हेल्लो भन्ने चलन कसरी र कसले ल्यायो भन्ने सबैको चासोको विषय हुन सक्दछ । आखिर सबैले फोनमा पहिलो बोलिने शब्द हेल्लो नै किन त ? हेल्लो को ठाउँमा अरु पनि त हुन सक्थ्यो भनेर धेरैले सोचेका होलान् ।
यसको वास्तविकता र हेल्लो शब्दको प्रयोग कसरी र कहिलेबाट सुरु भएको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । टेलिफोनका आविष्कारक अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल हुन् । अलेक्जेन्डरले १० मार्च १८७६ मा टेलिफोनको आविष्कार गरेर पेटेन्ट लिएका थिए । फोनको आविष्कार गरेसँगै अलेक्जेन्डरले सबैभन्दा पहिले आफ्ना मित्र वाट्सनलाई फोन गरेका थिए । उनले आफ्नो साथीलाई फोन गरेर मलाई तिम्रो खाँचो पर्यो, श्री वाट्सन यहाँ आऊ भनेर सन्देश दिएका थिए ।
तर, उनले फोनमा पहिलो पटक हेल्लो नभएर ‘अहोइ’ शव्दको प्रयोग गरेका थिए । टेलिफोनको प्रयोग आम रूपमा हुन थालेसँगै मानिसहरूले फोनमा कुरा गर्दा मलाई सुनेका छौ ? जस्ता शब्दको प्रयोग हुन थाल्यो । तर, पछि गएर वैज्ञानिक थोमस अल्बा एडिसनले अलेक्जेन्डरले सुझाएका ‘अहोइ’ शव्दलाई अप्रभंस गरेर सन् १८७७ मा हेल्लो भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
अक्सफर्ड इंग्लिस शब्दकोशमा लेखिएअनुसार थोमसले राखेको उक्त प्रस्तावलाई पारित गर्नका लागि पिट्सबर्गको केन्द्रीय जिल्ला तथा मुद्रण टेलिग्राफ कम्पनीका अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै टेलिफोनमा सबैभन्दा पहिले बोल्ने शव्द हेल्लो राख्न प्रस्ताव गरेका हुन् । उनको प्रस्ताव स्वीकृत हुनुका साथै उनले आफैँले टेलिफोनमा हेल्लो बोल्न सुरु गरे । जुन, पछि सबैले प्रयोग गर्दै अहिलेसम्म प्रयोग भइरहेको छ ।
तर, अलेक्जेन्डरले हेल्लो शब्दको प्रयोग कहिले पनि गरेनन् । मोबाइलको धेरै प्रयोग हुने थालेपछि हेल्लो को सट्टामा ‘हाइ’ पनि भनिन थालिएको छ ।
१७ सय वर्ष पुरानो रोमन…
A history of magazines in…
रेडियो बजाउन पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने…
पुरुषका लागि बनेको थियो स्यानिटरी…
श्राद्ध किन गरिन्छ ? यस्तो…
के अर्थ लाग्छ रावणका दश…
कसरी शुरु भयो नागपञ्चमी ?…
कसरी भएको थियो गोत्रको सुरुवात…
चीनमा यसकारण हुन्छ भूत विवाह
सय वर्षअघि एसियाकै पहिलो सुरुङमार्ग…